Ciidamo huwan ah oo Weerar ku qaaday Degaanka Mubaarak | Weheliye Online
Home Wararka Ciidamo huwan ah oo Weerar ku qaaday Degaanka Mubaarak
Ciidamo huwan ah oo Weerar ku qaaday Degaanka Mubaarak
Wararka Ka imaanaya degaanka Mubaarak ee Gobalka Shabeelaha hoose ayaa sheegaya in Ciidamo ka tirsan Militariga Soomaaliya iyo Kuwa Mareykanka ay weerar ku qaadeen saldhiyo ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ku leeyihiin degaankaasi.
Dadka Degaanka ayaa KNN u sheegay in Diyaarado ay la socdeen Ciidamada Xoogga iyo kuwa Mareykanka ay ka degaan degaanka,islamarkaana ay ku dhex lugeeyeen degaanka Mubaarak, iyagoona kadib weeraro ku qaaday saldhigo Shabaab ay kaga sugnaayeen degaankaasi.
Saraakiisha Ciidanka Xoogga ee ku sugan ee Gobalka Shabeelaha hoose ayaa sheegaya in Khasaaro lixaad leh ay gaarsiiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab,islamarkaana saacadaha Soo aadan ay faahfaahin ka bixin doonaan weerarkaasi ay qaadeen ciidamada xoogga iyo kuwa mareykanka.
Dhanka War ay daabaceen Al-Shabaab ayaa waxaa ay ku sheegeen in weerar ay kala kulmeen ciidamo ka tirsan Militariga Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka.
Al-Shabaab waxaa ay sheegeen in weerarka ay ku dileen 2 sargaal oo ka tirsan ciidamada weerarka soo qaaday.
Previous articleMadaxweyne farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo u anbabaxay Addis Ababa
Next articleDowlad Goboleedka koofur galbeed oo joojiyay xiriirkii kala dhexeeyay Hay’adaha Dowlada dhexe